Ho vonona ho hitsofana-maina Italia lamasinina ny fotoana tongotra no dingana lehibe teo amin'ny tany. Ny tany ny tantara, trano tsara tarehy, be toy izany ny kolontsaina sy ny kanto, be pitsiny sy mahalala fomba ny olona ho zavatra hahatsiaro mandra-ny andro farany! Te-hahalala ny zava-miafina? Italia lamasinina dia mampitolagaga kokoa noho izay azonao an-tsaina!
Trenitalia, ny fanompoana rail-pirenena amin'ny firenena rehetra ny làlana; dia tapaka hafainganam-pandeha fiaran-dalamby.
Ny safidy tsara indrindra dia izay hijery tsara Italia lamasinina, ary ny ho eo amin'ny lafiny azo antoka: ampitahao amin'ny vidin-javatra, daty sy ny fotoana ary mahita ny safidy izay mifanentana indrindra ny teti-bola sy ny Travel Map. Topazo maso roa mba hampitaha ny fandaharam-potoana. Ianao dia mety ho sahiran-tsaina ny voambolana, dia ireto ny teny nohafohezina ho hitanao eo amin'ny Trenitalia site:
Tokony Book ny Italia lamasinina Ticket Online na mividy azy eo Station
Vaovao lehibe momba ny famandrihana ny tapakila ho any Italia lamasinina dia ny rafitra famandrihana-tserasera miasa nisy diso ary faran'izay azo antoka. Stations na aiza na aiza dia afaka ny ho feno - ary iza no mila IZANY karazana adin-tsaina, marina? Ianao no nomena ny safidy ho boky, na mivantana na vola ho an'ny fiaran-dalamby tapakila an-tserasera. Na izany aza, raha rehetra momba ny tsitrapo - hiandry mandra-mahazo any amin'ny gara sy mividy ny tapakila avy eo.
Ahoana no Get an'i Italia lamasinina Rehefa Got ny Ticket
Rehefa mahazo any Italia amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby, ny manaraka dia lehibe cue lamba board. Izany no toerana dia hahazo ny vaovao farany rehetra fanazavana ilainao. Raha tsy mahita ny solaitrabe, mitady ny vahoaka ny olona nitsangana teo ambany zavatra goavana - ary Dia izay! Raha tsy hitandrina ny fiaran-dalamby lisitra avy hatrany, aza manomboka panicking. Ataovy azo antoka ianao mijery ny "Partenze" (Fiaingana) fa tsy "Arrivi" (Fahatongavana) mba hisorohana ny fikorontanana. Ny kely indrindra safidy rehetra mampikorontan-tsaina dia ny mandeha amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby sy ny isan'ny andro lasa. Rehefa mahita ny fiaran-dalamby, mitady "Bin,"Fa" mimari-droa " (sehatra). Rehefa avy nahazo izany nandamina, marina ny anao ny handeha!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-to-italy-by-train/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)